March 2019 | Save A tareenka
Britain By tareenka - 8 On Oo Talooyin Off-Track
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Britain ayaa u duceeyey by shabakad badan tareenka taas oo saamayn ay taariikhda bulshada iyo koboca dhaqaalaha ee jiilalka. Oo haddii aad tahay enthusiast tareenka a, fasax ah xadiidka UK uu fududeeyaa hawlaha xiiso meelo jidka ka Aberdeen inay Penzance oo dhan. Marka haddii qalbigaagu fadhiyo…
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Disneyland Paris inta badan waa caalamiga ah Disney Park ugu horeysay ee ay taageerayaal badan in ay soo booqdaan. Ma rabtaa in aad ogaato sida ay u qorsheeyaan ay fasax Disneyland ugu fiican ee Paris lagu jiro xagaaga iyo jiilaalka? Markaas aad yimaadeen meeshii xaq u! Waxay ku taallaa in Marne-la-Vallee, xaafad ka mid ah…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Inta badan safarleyda khamriga jecel waxay leeyihiin Munich oo ku jirta liistadooda. Waxaa la siiyey in Oktoberfest waxaa jiri lahaa mid aad u, laakiin Nockherberg Starkbierfest ah – Munich Beer Festival Strong keentaa wax dheeraad ah. No, ma dadkii badnaa. Waxaad la kulmi doonaa nus badan. Laakiin biirka waa labanlaab…
Waqtiga Akhriska: 7 daqiiqo Kuwani waa musings ku suxuunta fiican degaanka aan ku riyaaqay, intaan joogo Austria. Waxaan joogay xagaaga 2016 waayo, internship 4 bilood at a NGO degaanka yar oo cabbirkooda. waayo-aragnimo internship waxa uu ahaa sidaas u weyn oo, in aan la kulmay…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Markii nin socoto ah sheegaye booqanaya France, dadka intooda badan isla markiiba u qaadan lahaa Paris. Si kastaba ha ahaatee, caasimada France ee magaaladanuna ma aha magaaladii oo keliya qiimihiisu booqanaya dalka this qurux badan, U safarka Strasbourg waa IN cusub. meelo kale oo badan waa sida istaahila mahadnaq ah oo dhan…